Handball – «CCCOI 2016» : nomontsanin’ny St Michel ny Kaomorianina | NewsMada
Handball – «CCCOI 2016» : nomontsanin’ny St Michel ny Kaomorianina
Niditra tamin’ny andro faharoa, omaly, ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI), taranja handball. Fihaonana, tanterahina eny amin’ny kianja mitafon’Ankorondrano.
Anisan’ny vokatra nisongadina teo amin’ny sokajy «B» lehilahy ny nanamontsanan’ny AS St Michel an-dry zareo Uhuru avy atsy Kaomoro, tamin’ny isa mavesatra 41 noho 12. Tsy niady mihitsy ny fihaonana satria nanjaka tokana ry Zo sy ny namany, tamin’ity. Nitarika anisa hatrany am-boalohany ka hatramin’ny fiafaran’ny fotoana ny mpilalao malagasy.
Tetsy ankilany, lavon’ny US Tamponaise kosa ny Hasin’i Toamasina. Tamin’ny isa 24 noho 21 ny nahazoan’ny Reonioney ny fandresena, tamin’ity. Niady ny fihaonana, saingy ny nahavoa ny ekipan’Antsinanana tsy fitandremana kely. Nanao fanafihana tsy nahomby ka mivadika baolina maty ho an’ny vahiny izany.
Teo amin’ny vehivavy, sokajy “B”, niondrika teo anatrehan’ny AS Tsiky, tamin’ny isa mazava 31 noho 12, ny MF Storm avy any Seychelles. Nifanalavitra ny fahaizan’ny mpilalao teo amin’ny roa tonta. Nanantombo betsaka na teo amin’ny tanjaka na ho an’ny taktika ny mpilalaon’i Boeny. Ny JSB La Réunion indray, nanilika ny PC Boueny Mayotte, tamin’ny isa 20 noho 11.
Hitohy anio ny fifanintsanana ka lalao fito ny voalahatra amin’izany, telo eo amin’ny vehivavy ary efatra kosa ho an’ny lehilahy.
08:00 – V- “A” : Port Maorisy # Company Mayotte
09:00 – V-“B” : Storm Seychelles # JSB La Réunion
10 :00 – V-«B» : AS Tsiky # Boueny Mayotte
11:00 – L-“A” : Tampon # Tsingouni
02:00 – L-“A” : Brothers Seychelles # Curepipe Maorisy
03:00 – L-“B” : St Gilles La Réunion # Tsimkoura Mayotte
04 :00 – L-«B» : Vacoas Maorisy # AS St Michel